Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU oo soo gaba-gabeeyay shirarkoodii qiimaynta ahaa
Ururka OYSU oo soo gaba-gabeeyay shirarkoodii qiimaynta ahaa
Posted by ONA Admin	/ November 20, 2011
Ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeeniya (OYSU) laantiisa Minneasota ayaa maanta soo gabagabeeyay shir balaadhan oo lagu qabtay xarunta Sabathani Community Center ee magaalada Minneapolis.
Shirka oy goobjoog ka ahaayeen madaxda jaaliyada Ogaadeeniya ee gobolka Minneasota ayay masuuliyiinta ururka dhalinyaradu ku soo bandhigeen wax qabadkooda iyo qorshaha ay mustaqbalka dhow iyo dheerba ay ka yool gaadhayaan.
Sidoo kale waxay dhalinyaradu ku lafa gureen shirka sidii ay uga qayb gali lahaayeen kaalin firfircoona uga qaadan lahaayeen shirweynaha ururka OYSU ee ka dhici doona wadanka Germany dhamaadka bisha December ee fooda inagu soo haysa iyadoo xubnihii shirkaas ka qayb galilahaa halkaas lagu magacaabey.
Waxaa sidoo kale shirkan mid lamid ah lagu qabtay maanta ugu yaraan 25 magaalo ama caasimadood oo ku kala yaala dunida dacaleed sida qaaradaha Eurupe, American, Africa, Asia iyo Australia. Shirarkan isdaba jooga ah oo ujeedadoodu ahayd in qiimeyn buuxda lagu sameeyo dhamaan laamaha OYSU ee ka jira dunida dacaladeeda ayaa dhamaantoodba guul kusoo gaba-gaboobey.
Ugu dambeyntiina shirka OYSU-MN oo ku soo dhamaadey jawi xiise leh ayuu wariye ka socday Radio xoriyo wareysi dheer oo meelo badan taabanaya la yeeshay madaxda ururka iyo qaar kamid ah xubnihii ka soo qayb galey shirka. Wareysigaas ood kaga bogandoontaa barmaamijka Radio xoriyo ee ugu soo horeeya hadii eebbe idmo.